सरकारको उदाशिनता र एउटा भ्रमले निम्तिएको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा घटना
Home धर्म संस्कृति सरकारको उदाशिनता र एउटा भ्रमले निम्तिएको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा घटना
भाद्र १९, २०७७,
विश्वमा कोभिड-१९ को माहामारीको कारणले सबै कुरा रोकिदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । कतिपय कार्यक्रमहरु गर्नैपर्ने पहिल्यै हुनुपर्ने कार्यक्रम, उत्सव, समारोह, धार्मिक समारोहहरु, खेलकुद कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न नभएर अन्य उपायबाट व्यवस्थापनपक्ष, सरोकारवाला, राज्य संयन्त्रको सहि तथा चुस्त निर्णयबाट सम्पन्न भइरहेका छन् । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि आम नागरिकले राज्यले लकडाउन भनेको बेलामा घरमै बसेका छन् । अत्यावश्यक गर्नुपर्ने कुरा वैकल्पिक उपायबाट गर्दै आएका र गर्नै नसकेका कुराहरु थाँति राखेर अगाडि बढिरहेका छन् । निषेधाज्ञा लगाएको बेलामा छिटपुट भिडभाडका घटनाबाहेक शान्त तरिकाले सरकारको निर्देशन पालना गरिरहेका छन् ।
प्रसंग ललितपुरको रातो मक्षेन्द्रनाथको रथ तान्ने परम्परा र यसबाट उत्पन्न झगपले अहिले विश्वलाई गिज्याइरहेको छ । सर्वसाधारण निशेषाज्ञाको पालना नगरी आप्mनो धर्म र संस्कृति जोगाउन पुग्छन् । यसले उनीहरुको धर्म र परंपराप्रतिको अथाह माया देखायो, तर त्यही हुल घरबाट धर्म गर्न निस्केका अराजक भएर विश्वलाई नै गिज्याउने जघन्य पाप गर्न उद्यत बने । एउटा निर्दाेस प्रहरी जवाललाई मरणासन्न हुने गरी पिटे। यस घटना घट्नमा केवल स्थानीयको मात्रै दोस त नहोला, यहाँ स्थानीय प्रशासन, नेपाल सरकार र गुठी संस्थानको पनि गल्ति होला । तर जे भएपनि त्यो घटनाको निर्दयी क्रुर दृष्य साच्नै नै दुखदायी र निन्दनीय छ ।
नेपालमा मात्र नभई बिश्वमा नै कोभिड-१९ को कारणले विभिन्न धर्म सम्प्रदायमा मनाइने मेला पर्बमा ठुलै असर पारेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको एक महिने महान पर्व रमजान कयौं मुस्लिम दाजु भाइहरुले मस्जिदको दर्शन गर्न समेत नपाइ सकियो, इद पनि त्यसै गरि सकियो मन बुझाएर आफ्नै आफ्नै घरमा मनाए त सबैले। हाम्रै देशमा सोह्र श्राद्द सुरु भएको छ, र बिगतका बर्षमा जस्तो विधि विधानका साथ श्राद्ध गर्न नसकिने कुरा सबैमा बिधितै छ, देवता भन्दा पित्री ठुला हुन्छन् भन्ने धर्ममा आफ्नो आस्था भक्ती अनुसार श्राद्द गर्न नपाउदा पनि चित्त बुझाउनै पर्ने छ, कयौं समुदायको आस्था भक्तीको केन्द्र कुलपुजा पनि हुन सकेको छैन, एक ठाँउ बाट अर्को ठाँउ वा एक देश बाट अर्को देशमा यात्रा गर्न नपाउदा आफ्नै बाबुआमाको किरिया सम्म गर्न नपाउनेको पिडा सायदै सब्दले बर्णन गर्न सकिँदैन, अब दशै तिहार पनि जसो तसो घरमै थुनिएर मनाउनुको बिकल्प केही छैन र यस्ता अनगिन्ती धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप छन् विश्वभरी हुन र गर्न नसकिएका। यति थाहा पाउदा पाउदै र बर्तमान अबस्थाको ज्ञान हुँदा हुदै रातो मत्स्यन्द्रनाथको रथयात्रा हुनु नै पर्ने अनिवार्यता हुन्छ र? यदि रथयात्रा नहुदा बिघ्न बाधा आउँछ भन्ने बिश्वास हो भने बर्तमान अबस्थाको जानकारी र मानब कल्याणको चिन्ता भगवानलाई नहोला र? भन्ने तर्क पनि जनमानसबाट आइरहेको छ
घटना कसरी शुरु भयो ?
यदि कुनै कठिनाइले घेरेको थिएन भने वर्षा र सहकालका देवता रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा यतिबेला सकिइसकेको हुन्थ्यो ।
शरद् ऋतु सुरु हुन लागिसकेको यो समया रातो मत्स्येन्द्रनाथको बारेमा चर्चा हुने समय पनि होइन । तर कोरोना भाइरसका कारण निम्तिएको संकटले केवल जनस्वास्थ्यमा मात्रै असर पारेन, झण्डै एक हजार वर्षदेखि चल्दै आएको संस्कृतिमा समेत अवरोध सिर्जना गर्‍यो ।
रथारोहण गरेको समेत लामो समय हुँदासम्म पनि रथयात्रा नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबार बिहान पाटनका युवाहरू गुठी संस्थान र प्रशासनलाई दबाब दिने रणनीति बनाउन पुल्चोकमा भेला भएका थिए । जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पुरा गरेर रथ तान्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
भेलामा सहभागीहरुका अनुसार त्यतिबेलासम्म रथ तान्ने कुनै योजना नै थिएन । तर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गर्न खोज्यो ।
प्रहरीले स्थिति खल्बल्याइदिएपछि स्थानीय युवाहरु रथ तानेर देखाउँछौं भन्दै कस्सिए । अरु मानिसहरु पनि भेला भए, र ठूलो भीड जम्मा भएपछि स्वस्फूर्त रुपमा रथ तान्न थाले । त्यसलाई प्रहरीले रोक्दा झडप भयो । र, पुल्चोक क्षेत्र तनावग्रस्त रहृयो ।
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा गर्न जोडबल गर्नुका पछाडि एउटा त्रासले पनि काम गरेको छ, दशैंसम्म रथयात्रा नभए मत्स्येन्द्रनाथलाई भक्तपुर लैजानुपर्छ । त्यसको असर ललितपुरमा पर्‍यो । स्थानीयहरुले रथयात्रा गर्न दबाव दिन थाले । १० दिनभित्र रथयात्रा नगर्ने हो भने पुल्चोकबाट गाःबहाल हुँदै मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल र अन्त्यमा जावलाखेल रथ पुर्‍याउन कम्तीमा चारदेखि पाँच दिन समय लाग्ने थियो । यदि शुभसाइत पाउन मुस्किल भयो भने असोज २ गतेदेखि मलमास सुरु हुने र मलमास सकिएलगत्तै दशैं सुरु हुने अवस्था छ । मलमासमा यस्ता धार्मिक गतिविधिको फल नहुने भएकाले धार्मिक गतिविधि गरिँदैन र दशैंअघि नै रथयात्रा गरिएन भने मत्स्येन्द्रनाथलाई भक्तपुर लैजानुपर्छ भन्ने त्रास ललितपुरबासीमा देखियो
राज्यको उदााशीनता अनि स्थानीयको जिद्दिपन
कहिँ न कहि राज्यबाट चुक भएकै होला तर तेसैको आडमा धर्मका ठेकेदारहरुको एकोहोरो भेडोपनाबाट राज्य संयन्त्र पनि आफ्नो दायित्व लिएर सडकमा ओर्लेको देखिन्छ। मच्छिन्द्र नाथको रथ यो बर्ष रोक्दैमा या नगर्दा पाप लाग्ने हैन। प्रशासनले रोक्न खोज्दा आफ्नो धर्म नाश हुने तथाकथित संकिण मानसिकताले देशमा द्वन्द्व उत्पन्न गराउन तल्लीन देखिन्छ । आफ्नो धर्म संस्कार रितिरिवाज सबैलाई प्यारो हुन्छ यसो भन्दैमा जबर्जस्ती नै गर्न खोज्ने ? सबैले आ आफ्नो ठाउँ बाट सकारात्मक सोच लिदा के जान्छ? भन्ने एकातिरको तर्क छ भने अर्काे तर्फ सरकारको स्थानीयवासी र धर्म सँस्कृति प्रतिको उपेक्ष्या र उदासीनताको परीणाम जनता र सुरक्ष्याकर्मीले भोगे ! सरकारमा बस्नेले थोरै मिहिनेत गरे भने सामाजिक बैमनस्यतालाइ धेरै हदसम्म निर्मूल गर्न सक्छ । टारौँ, टरी हाल्छ भने पछि घटनाले जुन रुप पनि लिन सक्छ । महामारीमा पनि अनुशासीत हुने हो भने जात्रा मात्रा सजिलै सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो कि ? मच्छेन्द्र नाथसँग आवद्ध सम्पूर्ण गुठीहरुबाट छानीएका बलिया १०० स्वयँसेवक फोटो खुलेको परिचयपत्रसहित हरेक दिन लाइन लागेर भेरिफाइ गरेर, उनीहरुलाइ जात्रा नसकिउन्जेल एउटा होटेलमा सम्पूर्ण गासबासको सुबिधा सहित स्थानीय सरकारले जिला प्रशासनको कडा निगरानीमा राखेर जात्राको अन्तिम दिन मात्र घर जाने ब्यबस्था मिलाउन सकिन्थ्यो होला । प्लानिङ्गको अवाभ र उदासीनता देखियो सरकारमा ! सहमति र सहकार्यमा यो असम्भव कुरो थियेन । स्थानीय राजनितिग्यहरुको खटाइ बढ्थ्यो तेति हो । ती सयजना स्वयँसेवकले नपुगे, अनुशासनमा बसेका आर्मीका बलिष्ठ जवानहरु लाइ रथ तान्न प्रयोग गरेर जात्रा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । भीड नगर्नको लागि सर्वदलीय सहमती जुटाउन सकिन्थ्यो जसले स्थानीय आस्थावान भक्तहरुलाइ भीड नगर्न कन्भिन्स गर्ने जिम्मा लिन्थ्यो । त्यो सर्वदलियका सदस्यहरुले टोल टोलमा माइकिङ्ग गरेर टिभि एफएम युट्युब प्रयोग गरेर एक हप्ता देखि टोलबासीको सहमति जुटाउन सक्थ्यो ।
मेष राशिलाई रोजगारीमा सफलता, सिंह राशिलाई आफन्तबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने
Rupesh Kharel - २०७७, १९ भाद्र शुक्रबार ११:५० 0
काठमाडौं, २७ कात्तिक आजको पात्रो : २७ कात्तिक, शनिबार । तद्अनुसार १३ नोभेम्बर । (नेपाल संवत ११४२ कछलाथ्व) कात्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, आज कुष्माण्ड नवमी...
खबर वाइड संवाददाता - २०७७, १९ भाद्र शुक्रबार ११:५० 0
काठमाडौं, मंसिर १ । नेपाल संवत ११४१ आजबाट शुरु भएको छ । नयाँ वर्ष शुरु भएको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने प्रचलन छ । नेपाल...
तिहार मनाउँने प्रचलन कसरी सुरु भयो
तिहार हिन्दुहहरुको एक विशेष चाड हो । यो पर्व कात्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारबाट सुरु भएर कात्तिक शुक्ल पक्षको द्धितीया तिथिको भाइटिकासम्म...
अपराध Rakshya Nayak - २०७७, १९ भाद्र शुक्रबार ११:५० 0
दाङ, २३ मंसिर दुई लाख नगदसहित दाङमा ६ जना जुवाडे पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार उनीहरू घोराही-१३ डुम्मरगाउँबाट पक्राउ परेका हुन् ।...
राजनीति Rakshya Nayak - २०७७, १९ भाद्र शुक्रबार ११:५० 0
अर्थ Rakshya Nayak - २०७७, १९ भाद्र शुक्रबार ११:५० 0